स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक - Online Majdoor
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १५:०३
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या दिन दुगुणा रात चौगुणा बढिरहेको छ । यस्तो बेला संसारका नागरिकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । यसबाट कुनै नागरिक सुरक्षित हुन राम्रो स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । स्वास्थ्योपचारको लागि सरकारले आवश्यक स्रोत र साधन पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ या सहज बनाउनुपर्छ । तर, अहिले रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि कति चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू डराउँछन् । अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना हुन आएका बिरामीहरूलाई कहिले उता र कहिले कता भनी फर्काउँछन् र भर्ना त के स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्दैनन् ।
लक डाउन गरेर नेपालीलाई घर–घरमा बस्न आग्रह गर्दैमा सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । कोरोनाको लक्षण देखेका बिरामीहरूको के कसरी स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्छ, शङ्का लागेका बिरामीलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ र सोको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अस्पतालमा स्वास्थ्योपचार नभएको भनी बिरामीहरू रुँदै फर्किरहेका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षणका उपकरण, रोग रोकथामका औषधि र पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले त रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीमात्र होइन अन्य रोगका बिरामीहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको खबर सञ्चारमाध्यमले दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट सङ्क्रमित बिरामीमात्र होइन अन्य रोगका बिरामीसमेत उपचार गर्न नपाएर मर्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदैमा सरकार र देशै बिरामीजस्तो हुनुहुँदैन । सङ्कटको बेला झन् जनताको स्वास्थ्योपचार गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । यो बेला सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । अस्पतालमा डाक्टर हुँदैन, स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचार हुँदैन, बिरामीलाई भर्ना गर्दैन भने रोगीहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन् या बच्छन् ? के यसले देशमा सरकारै नभएको जस्तो अनुभूति हुँदैन ? के सरकार सुतिरहेको स्थितिमा छ ? यदि छैन भने सङ्कटविरुद्ध लड्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ, यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ ।